Ahoana ny fizarana rakitra amin'ny tamba-jotra Linux | Avy amin'ny Linux | ChrisADR | Avy amin'ny Linux
ChrisADR | | GNU / Linux, Tambajotra / seriver, Tutorials / Manuals / Tips
Ity iray ity dia mankany amin'i Claudio mpiara-miasa aminay, izay te hianatra ny fomba hikirakira tamba-jotra Linux nefa tsy mampiasa Samba. Tao anaty fanehoankevitra tsy namana dia nangataka ny fananganana GUI i Claudio hahafahana manatanteraka asa efa an'arivony (raha tsy an-tapitrisany) efa nanao ary hanohy hanao izany ... satria ny ankamaroan'ny asa dia amin'ny console, ary tsy tiany izany. Aleon'izy ireo be ny mamorona GUI hahafahana mampiasa azy mora foana (farafaharatsiny Windows araka ny nambarany) ny tambajotran-tserasera ao anatiny. Andao aloha hidina kely ity alohan'ny vahaolana.
1 Fomba fandraharahana vs FOSS
1.1 Ny orinasa toy izany dia miaina amin'ny rindrambaiko
1.2 Natao hahatonga anao hiankina izany
2 Ny filàna dia renin'ny famoronana
2.1 Rehefa mizara folder amin'ny windows ianao dia mamorona lavaka fiarovana
2.2 Tsy ilaina izany
3 Tsy ho vahaolana velively ny fampijaliana olona
4.1 Fa maninona no zava-dehibe ny fampifantohana ny vaovao?
4.2 Tsy mamorona vovo-basy aho
4.5 Antontan-taratasy ofisialy (amin'ny Espaniôla !!)
4.6 Apetraho ny mpizara sy ny mpanjifa
4.7 Ampifanaraho ny mpizara
4.8 Atsaharo ny server
4.9 Mifandraisa amin'ny mpizara
4.10 Sokafy ny browser-nao
5 Hevitra farany
Fomba fandraharahana vs FOSS
Eny, avelao ho tsotra hatrany am-piandohana ... Ity dia zavatra izay ambara hatrany ao amin'ny tetikasan'ny FOSS (Rindrambaiko malalaka sy loharano misokatra), ny tsy fisian'ny kalitao any am-piasana. Nandre foana aho, fa toy izany lalao tsara kokoa ny mividy azy amin'ny orinasa tal satria tsara kokoa, programa toa izany tsara indrindra noho ny kinova maimaimpoana dia rafitra toy izany ny tsara indrindra noho ny maimaim-poana hafa. Andao hojerentsika ny antony:
Ny orinasa tal viva an'ny rindrambaiko
Raha orinasa aho ary ny asako dia ny mivarotra rindrambaiko, midika izany fa tsy maintsy mivarotra zavatra faran'izay mafy aho Bueno ho an'ny olona mba hividy azy, ary noho izany dia mila aho mandoa vola ho an'ireo mpamorona ahy haka izany, ary io no teboka fanombohana an'ity raharaha ity, rindrambaiko maimaim-poana ary amin'ny tranga sasany dia loharanom-baovao mivelatra novolavolain'i fankasitrahana. Tsy karamaina ny olona hamolavola zavatra ho an'ny ambiny. Ka raha lazainao ahy hoe manao ahoana ianao rindrambaiko o rafitra na izay tsara kokoa noho ny kinova maimaimpoana, lazaiko aminao angamba, fa misy olana lehibe amin'izany:
Natao hahatonga anao hiankina izany
Izany dia toy ny zava-mahadomelina, ny rindrambaiko manana fananana bebe kokoa ampiasainao, ny tsy fahaizanao misaina sy mamaha samirery ny zavatra. Andao hodinihintsika kely fotsiny ity, fantatrao ve hoe aiza no ahazoanao bebe kokoa, amin'ny varotra na amin'ny fikojakojana? Tsotra ny valin'izany, na lafo be ny programa na ny rafitra, ny tombony amin'ny fikojakojana dia ho lehibe kokoa noho ny tombom-barotra amidy, satria amin'ny fotoanan'ny olana dia tsy maninona ny vola tsy maintsy apetraka hamahana azy satria fotsiny tsy afaka ovay ny fotodrafitrasa amin'izay fotoana izay.
Ny filàna dia renin'ny famoronana
Ny fomba tsy finiavana hangataka GUI dia tsy antony ampy hanaovana izany, ary miaraka amin'izay koa, miala tsiny raha maharary an'i Claudio izany, saingy misy zavatra manan-danja kokoa tokony hataoko sy tetikasa handraisako vola hamatsiana ny fotoanako amin'ny famahana ny tsy fanao fizakan-tena sy ny tsy fahaizanao mandanjalanja. Fa satria nanontany ianao, tsara, izahay dia hanazava ny antony tsy mbola misy GUI momba zavatra iray Windows tena tsotra izany.
Rehefa mizara folder amin'ny windows ianao dia mamorona lavaka fiarovana
Eto mihoatra ny iray no hilaza amiko fa diso aho sns sns ... fa ny tena izy dia rehefa mampiasa ianao nmap Mba hahafantarana solosaina windows, angamba raha amin'ny tamba-jotra "atokisana" izy io dia handefa serivisy amin'ny seranana sasany hahafahany mizara rakitra. Tsy mampidi-doza fotsiny izany, fa tsy dia fantatra loatra fa maro amin'ireo fanafihana mahomby no mitranga noho ny fizarana fidirana amin'ny alàlan'ny tamba-jotra. Fa maninona no mitranga izany? Eny satria ny filozofia Mampianatra anao hiteny i Windows SI nefa tsy fantany tsara izay mitranga. (Tadidinao ny fiankinan-doha?) Ny fomba tsotra iray hamahana izany dia ny fikarakarana tsara ireo fitaovana, fa toy ny filozofia Windows dia tsy izany, eto no misy ny fikarakarana milalao, ary mahatonga anao tsy maintsy manao izany mila an'ny olona hanao zavatra ho anao.
Tsy ilaina izany
Raha ny filàna no renin'ny fahariana, tsy misy filàna dia tsy misy na inona na inona. Izany dia zavatra tsotra be takarina, raha tsy mila izany ny olona mampiasa azy (mazàna ny mpitantana ny rafitra, na ny olona mampiasa mpizara) dia tsy izy ireo no hamorona azy. Amin'ny tranga tena manokana (mazàna amin'ny rindrambaiko maimaimpoana) mametraka kely ny tongotr'ireo tsy ampy traikefa ny mpamorona ary manapa-kevitra ampio mamorona GUI (Git manana GUI ho an'ireo izay te hanandrana azy), fa indray, ity dia natao ho an'ny madio fankasitrahana an'ny mpamorona, hatramin'ny habetsahan'ny asa tena lehibe dia lehibe, ary vitsy ny mpamorona, ka ireo asa ireo dia afindra amin'ny fotoana malalaka avy amina mpamorona fo tsara fanahy. (Aleo tadidio fa tsy misy olona mandoa anao hanao izany, ary mbola manana fianakaviana, asa ary andraikitra ianao)
Tsy ho vahaolana velively ny fampijaliana olona
Raiso ho torohevitra sy fanehoan-kevitra ho an'izay rehetra mamaky azy ity, tadidiko ny horonantsary izay hitako tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'i Obama (olona iray heveriko ho ohatra tsara amin'ny olona iray), izay misy lehilahy tezitra manakiana sy manompa azy fa tsy nanao izany izy. tsy misy mihitsy. Tsy nanao na inona na inona izy, tsy noho ny tsy vitany, izany hoe izy no olona matanjaka indrindra teto ambonin'ny planeta tamin'izany fotoana izany, saingy satria fantany fa tsy tokony hampidina ny tenany amin'izany haavo izany izy. Tsy vahaolana izany ary tsy ho vahaolana amin'izao fiainana izao, raha miditra amin'ny ady hevitra dia tsy hitondra zavatra tsara mihitsy, misy olona mety mino fa marina izany, fa farafaharatsiny ny fampitahorana sy ny fanehoan-kevitr'i X dia tsy hanetsika ahy fotsiny. malalaka alohan'ny hanombohana ny fampianarana.
Rafitra fisoratana anarana amin'ny tamba-jotra dia protokolon'ny haavon'ny fampiharana izay manome vaovao foibe y sincronizada amin'ny tamba-jotra, dia miasa ho an'ny rafitra Linux toa ny Windows sy ny hafa (izany dia noho ny famolavolana azy haavon'ny fampiharana). Ahoana no hiresahantsika an'izany foibe, midika izany fa miatrika vahaolana maodely Client / Server izahay. Efa niresaka momba izany tamim-pahefana isika tamin'ny fotoana hafa, fa tsy misy zavatra hafa manasongadina andinindininy kely.
Fa maninona no zava-dehibe ny fampifantohana ny vaovao?
Misy olon-kafa hilaza hoe, «fa manana fampahalalana manan-danja amin'ny karazana masinina ananako, ny solosaina findaiko, ny solosaina an-trano sns sns ». Ny olana dia izao manaraka izao, raha maodely azo antoka ny fanarahana narahina, dia ho tsikaritry ny olona fa sarotra ny mamorona sy mitazona backup amin'ny teboka maro, mora kokoa (ho antsika rehetra izay mampiasa script sy ny hafa) dia ny mamorona teboka tokana ahatongavan'ireo vaovao ary manomboka eo dia miaro ny angona. Ho fanampin'ny fananana kinova maromaro amin'ny teboka samihafa dia tsy vitan'ny hoe manasarotra ny fanarahana ny vaovao izy io, fa manasarotra ny asa ihany koa.
Tsy mamorona vovo-basy aho
Ho an'ireo izay mino segondra fa nahita izany tamin'ny fitsapana sy ny hadisoana aho, satria tsy misy lavitra amin'ny marina, mampiasa kely fotsiny ny zavatra atolotry ny Google ahy aho ary andao jerena izay hitako tamin'ny fikarohana voalohany (hihevitra aho fa any Ubuntu izy ireo. ireo izay mampiasa azy, ary inoako fa ho an'i Fedora ny fiovana tokony ho kely indrindra)
Tompony. Christopher Diaz Riveros
Araho hatrany izay voalaza ao officiel. Ity angamba no iray amin'ireo dingana voalohany hanaraka, ary apetrako raha sanatria misy mieritreritra fa nahalala zavatra momba ny NFS aho talohan'ny nanoratako ity lahatsoratra ity.
Lava loatra; aza mamaky. Isaky ny mahita an'io fanafohezan-teny io izy ireo dia afaka matoky 100% fa io no "kamo" mamaha olana, dia maro no hilaza fa ahoana no hahalalana raha amin'ny Anglisy izany, ankehitriny, hain'izy ireo izany ka tsy misy safidy hitakiana any aoriana. 😉 Mampiasà betsaka ny dicciontary an-tanàn-dehibe aho hahatakarana ny ankamaroan'ireo hevitra ireo.
Antontan-taratasy ofisialy (amin'ny Espaniôla !!)
Ny fanahy tsara fanahy dia niasa tamin'ny fandikana ho anay ity pejy tsotra nefa feno ity izay ilaina rehetra hametrahana mpizara NFS ao amin'ny tamba-jotra.
Ho hitantsika haingana ireo dingana manaraka. Avelako ianao ny rohy ho an'ireo liana tsy afaka mampiasa Google noho ny antony X hahatongavana any amin'ny toerana iray.
Apetraho ny mpizara sy ny mpanjifa
Handeha hametraka isika izao amin'ny console inona no ilaina amin'ny toerana roa hampiasana ireo rakitra zaraina. Ao amin'ny mpizara no apetrakay nfs-kernel-server ary amin'ny client nfs-common
Ampifanaraho ny mpizara
Ny NFS dia miasa amin'ny alàlan'ny fisie fikirakirana hita ao /etc/exports. Ity rakitra ity dia milaza amin'ny NFS izay rakitra zaraina sy ny fomba hiantsoana azy ireo, ankoatry ny fananana ohatra tena tsara amin'ny fampiasana azy io amin'ny toerana misy anao, dia hampiasa ny hampionona hanitsy azy noho ny azo antoka hatrany vim (ireo izay tsy mahazo aina amin'ny vim dia afaka mampiasa nano)
Ho an'ity ohatra tsotra ity dia milaza amin'ny fanondranana aho fa te hizara ny lahatahiry workspace (ny * manondro fa te hizara ny atiny rehetra aho ary tsy mamela toerana malalaka dia manoratra fahazoan-dàlana sy safidy mifanaraka amiko indrindra, amin'ity tranga ity rw ho an'ny fanoratana sy ny famakiana)
Atsaharo ny server
Raha efa nandamina tsara isika dia mila mamerina ny seriver (na manomboka azy raha tsy mihetsika) dia tsy ilaina isaky ny misy fiovana fa manararaotra manazava aho, raha tsy tianao ny hamerina azy rehetra, tsotra. exportfs -ra hamaha ny olana.
Ny tsipika voalohany systemctl start nfs-kernel-server mampihetsika ny mpizara, ny faharoa dia manamarina fotsiny fa tsara ny zava-drehetra (raha tsy maitso izy dia tsy mety).
Mifandraisa amin'ny mpizara
Ankehitriny dia hampifandray ireo fitaovanay hafa izahay, satria hampiasainay ilay hampionona, ary ny baiko mount.
Eto dia tsara ny manantitrantitra fa ny IP dia voatendry araka ny itiavanao azy, tsy fantatro raha hampiasa DHCP na boky torolàlana izy ireo, fa raha vao manana ny IP izy ireo dia afaka mampiasa azy, manampy izy ireo : / lalana / an'ny / ny / lahatahiry ary toerana ahafahanao mametraka ny fifandraisana, raha ny amiko dia namorona fampirimana antsoina hoe aho aho compartido.
Sokafy ny browser-nao
Eto izy ireo dia samy ao amin'ny kinova hampionona toy ny amin'ny kinova Gui. Ary asehoko anao kely ny fomba fanatontosako ny asako amin'ny institiota, mampiasa milina virtoaly foana aho hampiasana ny mombamomba ireo fampianarana ((izany no hahitan'izy ireo OSX napetraka) ary iray ho an'ny fiteny tsirairay, mba hahafahako mifehy ny tontolon'ny fampandrosoana sy aza fenoy programa tsy ilaina ny Gentoo-ko. Fa maninona ubuntu? tsara kokoa noho ny Fedora ary haingana kokoa ny mamorona milina fanandramana izay hamafaako haingana koa. Araka ny nolazaiko 🙂 ny tsirairay dia manaraka ny filozofia ary mamela ny zavatra rehetra ho vonona ampiasao tsy mieritreritra be Izy io dia zavatra manamora ny ubuntu ho an'ireo mpampiasa azy 🙂 (ho fanampin'izay nataoko ny mari-pankasitrahan'ny mpandrindra ny rafitra ao amin'ny ubuntu (mamela anao hanome izany ao amin'ny fianakaviana lehibe telo an'ny rafitra ny LFCS: Ubuntu (Debian), CentOS (Red Hat) ary SUSE (SUSE) )), ka fomba tsara hitadidiana apt-get y apt)
Efa betsaka ny zavatra nosoratako tamin'ity indray mitoraka ity, fa araka ny ahitanao an'i Claudio dia dingana 4 ihany (antenaiko fa afaka manao ny Google irery ianao mba tsy hanisana), ary fantaro hoe… tsy mila GUI ianao raha mila baiko dimy. Miala tsiny raha tsy vitako ny fanirianao hanao izao tontolo izao GNU / Linux miampy Windows, ary manakana anao tsy hieritreritra kely ary hianatra google zavatra. Ary raha te hanana fanovana maharitra eo amin'ny tamba-jotra sy ny fitaovana ianao amin'ny alalàn'ny /etc/fstabEny, tsy maintsy ho hitanao izany.
Azafady ho an'ny olon-drehetra, azafady, raha tsy mahalala fomba aho tamin'ity lahatsoratra ity, ary na dia somary somary sosotra aza ny fanoratako azy (tsy maintsy ekeko fa tsy misy olona te-hamotopototra ny asan'izy ireo sy ny ezak'izy ireo, ary na dia kely noho ny antsoina aza swagger) ... Manantena tokoa aho fa afaka manampy mihoatra ny iray amin'ny asan'ny fifandraisan'izy ireo izany. Misaotra betsaka noho ny fahatongavanao teto na eo aza ny tsy fahaizako sy ny hadisoako, arahaba 🙂
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Ahoana ny fizarana rakitra amin'ny tamba-jotra Linux
Nanaraka ny dingana ho an'ny Manjaro (Arch) aho tamin'ny androny ary tsy nety tamiko (mizara amin'i Samba aho) ary ny plugins mizara Thunar sy Nautilus
Mikasika ny "fikandrana am-baravarankely", heveriko fa tsy mety ny FLISS KISS. Ao amin'ny MS WOS dia misy ihany koa zavatra sarotra atao, ary amin'ny lafiny roa dia toa tsy tsara ho an'ny mpampiasa izany.
Maninona raha manome script na fonosana meta izay mametraka sy manamboatra ny NFS fa tsy mandika sy mametaka baiko 5?
Tsy dia be loatra ny sahy amin'ny voalohany, mainka fa ny faharoa
Ary raha ampidirintsika ny plugin ho an'ny NFS zarao amin'ny Thunar sy / na Nautilus (na hafa) tsara kokoa ho an'ny FLOSS sy KISS, sa tsia?
Ary tsy manoratra aho fa enti-modinao io, fa faly aho raha misy manao azy (ho an'i Samba koa ho an'ny firaketana) ary hampiasa azy io ho fitaovana hafa hanovana "olona" ho GNU / Linux mampiseho fa mora ny mizara fampirimana amin'ny NFS (na Samba) hampiasa azy io amin'ny fahitalavitra Smart miaraka amin'i Kodi
Octavio Sanchez dia hoy izy:
Maninona ianao no tsy manandrana manao izany? Raha atao teny hafa, raha heverinao fa ilaina sy ilaina amin'ny FLOSS sy KISS izany, dia mandrosoa ary hiara-hiasa amin'ny fiarahamonina amin'izany fomba izany.
Valiny tamin'i Octavio Sánchez
Tsy ampy izany fahalalana izany, fandaharana.
Etsy an-danin'izany dia tsy misy dikany ho an'izay manana azy ireo ary maniry ny hanana izany.
Ary raha mpianatra siansa solosaina te-hampideradera zavatra toa izany ao amin'ny CV ianao, tsara kokoa.
Mikasika izay niasa tamiko, ny fanaovana izany amin'ny SAMBA dia efa namoaka torolàlana voafintina ao amin'ny forum Manjaro ho an'ireo afaka manararaotra azy aho https://forum.manjaro.org/t/suggestion-samba-and-or-nfs-shares-and-plugins-easy-by-default/34169/4
RAFAEL PRESILLA dia hoy izy:
HO AN'NY MPIVAROTRA REHETRA NA FOTOTRA, Ahoana no fomba hamelantsika ireo serivisy mihetsika toy ny DEFAULT?
Valiny amin'i RAFAEL PRESILLA
Salama Rafael, hahafahanao mamela azy ireo amin'ny alàlan'ny fanombohana ny milina dia ilaina ny manitsy ny rakitra / etc / fstab mba hifandray mivantana amin'ny tamba-jotra, satria somary manam-pahaizana kokoa izany ary heveriko fa anontanianao izany amin'ny sehatry ny orinasa, misy fiheverana hafa momba ny fandriam-pahalemana toy ny fahazoan-dàlana sy anarana fidirana, teboka fidirana, hazo, sns. Miarahaba 🙂
Carlos Diaz dia hoy izy:
Manomboka amin'ity tontolon'ny linux ity aho, ary mamaky izay rehetra navoakanao tato ho ato, tsy azoko ny zava-misy ao amin'ny lahatsoratranao ary tiako holazaina ny ady anananareo miaraka amin'i Claudio, fa tena laniko ny fotoana laninao hanoratana azy ireo izao zarao ny fahalalanao, ny kely indrindra azonay atao izay tsy mandoa izany dia ny mamaky anao am-panajana! Misaotra betsaka anao ary miarahaba anao fatratra noho ny asa tsara tokoa.
Valiny tamin'i Carlos Diaz
Salama Carlos, ity ny rohy manodidina
Tsy ady loatra izany, midika izany fa manantena aho fa hanohy ny lohahevitra, saingy rehefa avy namaky ny teny manodidina aho dia manantena aho fa azonareo ny antony mahatonga ny fihetsiko ratsy, na raha tsy izany dia efa nanitatra ny toe-javatra aho, amin'ny lafiny roa dia tsy izany zavatra kasaiko hotohizana 🙂
Ary misaotra betsaka anao noho ny hevitrao, noho ny fanehoan-kevitra toa izao no nahaliana ahy nanoratra ary angamba mizara fotoana mahafinaritra miaraka aminareo rehetra mamaky ireto lahatsoratra ireto 🙂 Mampamangy
miaraka amin'ilay lahatsoratra dia milamina ny zava-drehetra, ny tsy ataoko »zarao» mihintsy dia OBAMA NO OLONA TSARA !!!!! iray amin'ireo mpitifitra LEHIBE INDRINDRA TAMIN'NY TANTARA MIARAKA AMIN'NY ISRAEL…. ny fizarana lahatahiry lasa data kely aorian'ny famakiana ny ESO.
Nampiasa Linux aho nandritra ny taona maro ary atoroiko ireo namako izay mampiasa Linux, fa azafady, matanjaka be ilay zavatra Obama.
Salama Ivan, misaotra fa nanokana fotoana hanomezana hevitra sy hizara. Heveriko fa Obama izay heveriko (ary zavatra manokana manokana izany, azonao zaraina izany na tsia, saingy ilaina ny manazava eto) momba ny zavatra toa izany izany:
Ho an'ireo izay efa namaky ny lahatsoratro hafa, na eto na amin'ny toeran-kafa, dia ho fantatrareo fa tsy olona "politika" be aho amin'ny fahafantarana izany, ary raha ny marina dia iray amin'ireo olana tsy dia miraharaha ahy loatra izany. Tiako ny manandrana, fa tsy maintsy ataoko izany rehefa ilaina izany. Araka ny nolazain'i Trump tenany taoriana kelin'ny naha-filoham-pirenena azy ... "sarotra kokoa noho ny nieritreretako azy" ... efa niresaka isika fa misy mainty, fotsy ary alokaloka, saingy heveriko fa ny fomba tena hahafantarana azy ireo dia ny fahalalana ny zava-misy REHETRA ... ary Izany dia zavatra iray izay sarotra amin'ny fanapahan-kevitra politika noho ny toetran'ny ankamaroan'ny fampahalalana.
Raha milaza aho fa mihevitra azy ho olona tsara dia mifototra amin'ireo toetra tsara naseho nandritra ny fotoana nitantanany ny biraom-panjakana, tsy milaza aho hoe tonga lafatra amin'ny lafiny rehetra izy, fa manana toetra maro mendrika mendrika izy naka tahaka. Manantena aho fa io dia afaka nanao mazava kokoa ny lohahevitra.
Adala ianao ao Taringa.
Valiny tamin'i Lopez
Na avelako eo tsy ho ela aorian'ny ards arahaba 🙂
carlos zevallos dia hoy izy:
Samba ho ahy mahafeno ny fepetra takiko rehetra, amin'izao fotoana izao dia manana izany mihazakazaka amin'ny tamba-jotra miaraka amin'ireo mpampiasa sy vondrona ary mahazo alalana amin'ny lahatahiry sasany miorina amin'ny mombamomba ny mpampiasa aho, tena tsara ny ataoko ary manana mpanjifa Windows sy linux aho.
Mamaly an'i carlos zevallos
Tena mbola tsy niditra tamin'ny tontolon'ny fampidirana windows-linux mihitsy aho, ary tena mahaliana ahy izany, saingy tsara fa tianao izany ary iza no mahalala, raha sahy ianao afaka manoratra lahatsoratra momba izany 😉 arahaba 🙂
Carlos, samba tena tsara zaraina amin'ny tamba-jotra Windows-Linux, fa ny olana dia rehefa manana tamba-jotra LAN amin'ny Linux fotsiny ianao. Samba dia tsy mandeha amin'ny tranga farany ary tokony hanatanteraka ny dingana rehetra notantarain'i ChrisADR ianao.
Tsy nampihariko izany, fa rehefa mamaky amin'ny Internet aho:
azonao atao ny mametraka mpizara samba amin'ny linux ary noho izany dia tsy ilaina ny manana varavarankely hampiasana azy amin'ny tambajotra.
Amin'ny tranonkala hafa: https://www.driverlandia.com/instalar-samba-para-compartir-carpetas-en-linux-debian/
Hitako fa satria Win7 mety misy olana amin'ny teny miafina, fa ny mpanjifa win7,8,10 ihany no ho voakasik'izany fa tsy ny mpanjifa linux izay hampiasa mpizara samba miaraka amin'ny linux.
fernan dia hoy izy:
Ny opensuse yast dia manana modely nfs, tsy fantatro ny momba ireo olana ireo, ary inona koa, tamin'ny manjaro ahy ny andro hafa dia nesoriko ireo fonosana nfs satria tsy ampiasaiko mihitsy, isaky ny mianatra kely kokoa aho dia manala zavatra ao. noho ny sakafo matsiro izay hitako fa tsy misy ilana azy ireo ho ahy, ary mihena tsikelikely ny RAM, mieritreritra aho fa ny distro tsotra dia tokony hanana zavatra tsy voapetraka mialoha, tsapako fa mitondra zavatra maro izay tsy fantatry ny vao manomboka akory hoe ho aiza izy ireo, azo antoka fa raha mametraka ahy gentoo ny mpanoratra ny lahatsoratra, dia mbola hametraka fonosana 200 kely kokoa izy ary hanao izay rehetra ataoko amin'ny manjaro, mandra-pahatongan'ny tsy fahalalako gentoo tapaka mazava ho azy.
Ary farany, amin'ity lohahevitra ity dia tsy maintsy asehontsika izay lazain'i Richard Staliman imbetsaka fa ny rindranasa maimaimpoana dia tsy midika hoe tokony ho maimaim-poana izany, heveriko fa eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny dia zatra mandoa smartphone amin'ny rindrambaiko feno tsy azontsika fantarina izay rehetra ataony. ary raha ny tokony ho izy dia mila rindrambaiko maimaim-poana izay manamora ny zavatra rehetra ho antsika isika ary maimaim-poana, tsy maintsy zatra mieritreritra kely ihany koa isika ary mitady raha misy ity lahatsoratra ity dia tsy hitako ny momba nfs fa hitako fa farafaharatsiny ao amin'ny openuse dia misy maodely misy sary ho an'ity , Tsy haiko na ho tsara na ho ratsy.
Mamaly an'i fernan
Manjaro dia tsara ary tsy dia kely noho ny Gentoo.
Fa raha te hanandrana an'i Gentoo ianao (koa) amporisihiko Sabayon.
Izy io dia Gentoo efa napetraka sy tsotra, kely kokoa na latsaka kely izay atao hoe Manjaro to Arch.
Manana Sabayon amin'ny milina virtoaly aho ary misy fahasamihafana lehibe kokoa eo amin'ny sabayon sy ny gentoo noho ny eo amin'ny manjaro sy archlinux, sabayon dia mampiasa entropy ho mpitantana fonosana lehibe (equo amin'ny console ary henjana amin'ny graf) izay fonosana binary, misy portage saingy tsy fantatro fahazoan-dàlana hampiasa azy io betsaka. Manjaro sy arch dia manana mpitantana fonosana iray ihany, ovao izay efa ao manjaro fa nametraka sy fikirakira maro ianao ary ny toerana anaovana azy, ny gentoo kosa dia ny fampiasana portage handrafetana ny safidy avy amin'ny kaody guente, fahasamihafana lehibe izahay amin'ny sabayon izay manome anao fonosana vitsivitsy izany dia avy amin'ny gentoo fa misy safidin'ny jeneraly.
Vao tsy ela akory izay dia niatrika ireo olana ireo koa aho, raha vao manomboka ao amin'ny Linux ny iray dia mahasosotra ny tsy mahita vahaolana na fampiharana haingana izay tokony hanana fomba fiasa mahomby nefa tsy manahirana. Manaja sy misaotra ireo mpandraharaha mandany fotoana aho, ary tiako ny manao tsara ny asany, nampianatra ahy izy ireo raha misy manao zavatra maimaim-poana na tsy tokony hatao tsara izany satria ao no mitondra ny tombokavatany manokana. Fa misy ny tafahoatra. Tsy ankasitrahana ny Linux satria amin'ny ankabeazany dia misavoritaka ny fanaovana fombafomba sy mametraka ny asany ary ny an'ny mpamorona rehetra izay, afaka manatsara ny asany, mamela azy io hianjera amin'ny baikon'ny terminal lava. Ny tena henjana dia misy ireo mpampiasa mandeha tafahoatra noho ny hakamoana na fiatoana ara-tsaina tadiavin'izy ireo hanao ny zavatra rehetra ho azy ireo.
Salama Ismael, misaotra tamin'ny fizarana ary te hanasongadina zavatra roa fotsiny aho ... UNIX dia mampiasa filozofia mazava tsara amin'ny famolavolana programa "manaova zavatra iray, ary ataovy tsara izany", noho ireo programa marobe ireo dia zavatra iray ihany no ataovy, ary izany dia Ilaina ny manatevin-daharana marobe mba hamahana ireo toe-javatra "sarotra". Tsy mandà aho fa misy programa vitsivitsy izay mety ho tsara kokoa, fa farafaharatsiny farafaharatsiny rehetra izany, tsy mbola nahatsapa tsy fahampian'ny lojika amin'ny programa GNU tena ilaina na ny kernel aho. Mampalahelo fa ny hevi-dratsy toy izany dia ateraky ny fandaharana "mieritreritra" tsy dia heverina firy.
MANKASITRAKA Namana ChrisADR, mazava ho azy fa fantatrao betsaka ny momba anao, miarahaba anao aho ary miala tsiny raha somary henjana aho tamin'ny fanehoan-kevitra nataoko teo aloha, tao amin'ny faran'ny terminal na ny vokatra tian'i gui. Saingy amin'ity lahatsoratra ity dia vao avy nanamafy ny zavatra notakiako foana tao amin'ny linux ianao, fomba mora hizarana ireo folder amin'ny Linux LAN Network ary araka ny ilazalazanao tsara an'ity lahatsoratra tena tsara ity, tena mandreraka be amiko amin'ny maha mpampiasa ahy, ny fanaovana dingana marobe. amin'ny terminal hahafahanao mizara ny lahatahiry amin'ny tambajotra Linux lan. Averiko indray, misaotra an'ity lahatsoratra ity ary azo antoka fa mahasoa ny maro izy io, tsy ho ahy, indrisy. Manantena zavatra betsaka kokoa avy amin'ny linux aho. Amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy manohy mampiasa ny Guindous ho an'ireo tambajotran LAN aho. Ary mazava ho azy, ao amin'ny kahie aho, manohy amin'ny MX Linux malalako aho.
Ravenman dia hoy izy:
Vahaolana tena tsotra izay matetika no tadiaviko hahazoana izay tadiavinao dia ny fampiasana azy https://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell_Filesystem y https://es.wikipedia.org/wiki/Files_transferred_over_shell_protocol.
Mamaly an'i Ravenman
Salama Claudio 🙂 Misaotra betsaka anao nanome anao fotoana hizarana, ary misaotra tamin'ny fialantsininao, azafady koa raha tsy mahalala fomba aho tany ho any. Na dia mahamenatra aza ny zavatra lazainao amiko, manana sosokevitra ho anao aho; Satria mety ho fiasa mahasoa izy io ary toa mihoatra ny iray no liana, azontsika atao ny mangataka tetikasa iray hampihatra azy ho volavola fanatsarana 🙂 Izaho manokana dia tsy manam-potoana na fotodrafitrasa hanaovana programa iray manontolo amin'ny voalohany, saingy angamba ireo mpiara-miasa amintsika Nautilus (GNOME) na Dolphin (Plasma) dia afaka manana izany ao amin'ny lisitry ny asany mandra-pahatongan'ny mpamorona sasany afaka mividy ny fotoana, ary mety ho haingana kokoa noho izy io amiko :)
Raha tianao io hevitra io, afaka jerentsika miaraka ny fomba sy ny toerana hamoahana ny tolo-kevitry ny fanatsarana, iza no mahalala ary mety misy zavatra toa izany koa efa andrahoina any ho any
Nametraka Syncthing aho ary tsy nanana olana intsony. Manome azy eto aho ho solony.
Salama, ekeko fa matoa i ChrisADR mandeha amin'ity bilaogy ity dia miandry ny manaraka aho, dia mianatra avy amin'izany fotsiny ianao, misaotra izany, amin'ny lamina hafa ary manohy amin'ny iray amin'ireo teboka amin'ilay lahatsoratra.
Ny zava-misy dia tsy maintsy maka tahaka ny rakitra sasany avy amin'ny ATM aho ary mampita izany amin'ny mpizara (GNU / LINUX), miasa amina rafitra backup aho, saingy misy fepetra hiarahako miasa amin'ny ATM (ATM) ary tsy afaka manokatra seranana aho, izaho koa tsy manana serivisy famindrana rakitra tambajotra windows, tsy afaka mampiasa ftp koa aho. Tsy manana fitaovana ho an'izany aho, serivisy manokana loatra izany ary tsy misy fitaovana ampiasaina amin'izany.
Saingy fantatro fa misy zavatra toa an'i SSH sy SCP ary miaraka izy ireo dia fitaovana azo antoka tokoa hatreto, saingy ahoana no fomba fametrahana SSH amin'ny varavarankely? fa tsy fandaharana tena mamela ahy hampiasa ilay protokol, mila zavatra marobe kokoa aho, mila zavatra misy interface CLI aho, mazava ho azy fa tsy mahalala na inona na inona aho, nandritra ny fikarohana nataoko dia nahita tranomboky python izay mamela anao hampiasa protokolan'ny tambajotra samihafa ary hanao fikarohana momba ny fomba fiasan'izy io, izao Manana rafitra miasa aho, izay tsy ampiasako samba na SFN fa afaka mamindra rakitra amin'ny fampiasana protokol azo antoka tsara aho.
Ny toerana tiako hiarahana amin'izany dia ny fahafantarana ny python sy ny fahafantarana fa misy (ssh), hamita ny asa nomena, raha olon-kafa aho dia nilaza aho fa tsy azo atao izany dia mila mamela ny seranan-tsambo aho na mampandeha ny fijerin'ny windows na izany tsy misy fitaovana mamela ahy hanao an'izany.
Ary tsy miditra amin'ilay lohahevitra izy io, fa raha manontany ahy ianao hoe maninona no tiako kokoa ny CLI noho ny GUI, ny CLI fotsiny dia azo ampiasaina ary manome fahefana lehibe kokoa noho ilay graf. Fitaovana CLI dia azo ampiasain'ny programa hafa (fonosana) ny graf dia natao ho an'ny mpampiasa ihany.
Salama 🙂 Eny, misaotra betsaka tamin'izay nolazainao, ary misaotra anao nizara ny zavatra niainanao.
Araka ny efa noresahinao, ny CLI dia toy ny majia ao ambadiky ny seho, tsy ekena foana, fa raha tsy misy azy ireo ny ankamaroan'ny zavatra hita (GUI) dia tsy mandeha mihitsy.
Arturo J. Ducoing O. dia hoy izy:
Aza kivy, tadidio fa ny mpampiasa Windows dia miavaka ary tsy mandra-pahatongan'ny fahasimban'ity rafitra ity ny fisian'izy ireo vao manomboka manontany tena ny amin'ny mahasoa azy izy ireo, ary na dia miverina mampiasa azy aza izy ireo.
Legiona ny mpampiasa Windows, ary misy demonia kokoa noho ny sasany, ary tsy zatra mamaky antontan-taratasy izy ireo, izany no mahatonga anao rehefa mitondra azy ireo any amin'ny tontolon'ny GNU / Linux izy ireo dia mijaly tokoa.
Mampiasà betsaka ny mombamomba anao aho, misaotra tamin'ny fizarana.
Valiny tamin'i Arturo J. Ducoing O.
eurekaaaa, hitako ihany ny zavatra nilako farany, "ny loharano misokatra diavolavolain'ny finiavana tsara." Mazava sy mendri-piderana izany, ary hita fa misy olona iray nanana filana nitovy tamiko sy namolavola (na nizara) tsy afaka namaky ny zava-drehetra, vahaolana izay notakiako fatratra. Ary eny, amin'ny finiavana tsara, "nizara" izy ary tena feno fankasitrahana aho. Saingy hoy ny fampidirana an'ity lahatsoratra ity hoe: "mila miatrika vahaolana tsara ianao", mazava ho azy fa tsy handoa vola aho, saingy tsy hametraka ilay rohy nahitako ny vahaolana, satria mendrika be ny fotoanako, tsy mandoa vola aho fa ... nandany fotoana vao nitady. Tsy afaka miresaka afa-tsy amin'ireo liana aho ary manana ahiahy mitovy amin'izany, fa ho hitanao ao amin'ny yuotube izany. 🙂
Rams Castaway dia hoy izy:
Mora tokoa ny "mitaky" vahaolana ary misy olona manararaotra manazava aminao amin'ny an-tsipiriany nefa tsy mandoa vola anao. ChrisADR (izay tsy fantatro) dia tsy nitaky denaria iray akory ho amin'izany, saingy nilaza tamim-pitiavan-tena ianao fa nahita loharano natolotry ny hafa, tsy mitady tombombarotra, ary mandà ny hanome ilay rohy ianao (by the way, tsy mila). Tsy fantatro koa hoe iza ianao, saingy tsapako fa ny fihetsikao dia mamela zavatra betsaka irina. Tadidio fa ireo "vahaolana tsara (izay) tsy maintsy voampanga" dia tsy nataonao sy ilay olona nanao azy ireo, tsy nampandoavinao vola koa Ka izany dia hamadika anao ho parasite fotsiny (karazana predation. Fifandraisana akaiky izay miankina amin'ny iray (mpampiantrano na mpampiantrano) ny iray amin'ireo mpandray anjara ary mahazo tombony kely.) Fanamarihana: napetrako ianao ny dikany mba tsy hanananao olana amin'ny fitadiavana azy, satria sarobidy be ny fotoanao.
Mamaly an'i Rams Castaway
Mazava ho azy fa tsy maintsy misy ratsy ao an-tsainao, satria mandray soa isan'andro ianao amin'ny fampahalalana apetrakao an-tsitrapo ataon'ny olona eto ary rehefa "araky ny" mahazo zavatra mendrika ianao dia mandà tsy hizara izany, hialana amin'izany. Raha foanana dia voafetra ny IP-nao ary mety tsy maintsy hanao fanaraha-maso tsy tapaka ianao mba tsy hahafahanao miditra indray amin'ny FromLinux satria raha manana zavatra ity vondrom-piarahamonina ity dia natao ho an'ny olona fa tsy ho an'ny katsentsitra.
Ernesto Iglesias dia hoy izy:
Voalohany indrindra misaotra ny lahatsoratra, tena nilaina izy io, na dia tsy tsotra toy ny nitiavan'izy ireo handoko azy aza, mikaroka bebe kokoa. Na izany aza, hitako fa manafintohina be loatra ary tsy mandeha amin'ny laoniny ny fampidirana rehetra sy ny hevitra tsy misy ifandraisany amin'ilay olana, raha tsy tsy te hamaly tsara kokoa ny mpanoratra dia misy olon-kafa no hamaly azy ary tsy nila niantso azy hoe samaritanina tsara izy rehefa avy niampanga ny vaovao tamina fandikan-dalàna . Na izany na tsy izany, misaotra. Mikasika na mitaky fiampangana izy ireo na tsia, na raha manao ny zavatra rehetra "noho ny fitiavana ny hafa" dia tsy antony hanaovana zavatra "amin'ny antsasaky ny halavany" sy "Google hafa", satria tsy ny rehetra no mila mahalala ny zavatra rehetra na "mandika ary mifikitra »kaody dia midika hoe mampiasa ny lohanao na mahatakatra na inona na inona. Miarahaba antsika rehetra ary mirary maraina
Mamaly an'i ErnestoIglesias
leonidas83glx dia hoy izy:
Ny tadiaviko dia ny mametraka folder amin'ny kapila mafy NTFS azoko tamin'ny Windows. Afaka miditra sy manoratra aminy avy amin'ny masiniko lehibe aho saingy tsy azoko apetraka amin'ny solosaina finday izay nametraka ny mpizara NFS tamin'ny milina lehibe sy ny mpanjifa amin'ny solosaina finday. Niezaka ny zava-drehetra aho fa tsy misy izany.
Mamaly an'i leonidas83glx
Tsy milaza aminao aho dia hoy izy:
Alefaso ny banga izay tsy mahavita izay ampanantenainy.
Mamaly an'i notelodigo
Ny volana voalohany niarahanay :)
Ady masina: iray amin'ireo olana lehibe indrindra * NIX